အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: တရားလား မတရားဘူးလား နဲ့ တောင်စဉ်ရေမရ
တခါတခါ (အခါများစွာ) ကျတော့ မတရားမှုတွေအတွက် ကိုယ်တွေကိုယ်တိုင်ကိုက ဘာမှမလုပ်နိုင်ကြဘူးမှလား။ ထိုင်ကြည့်နေကြရတာပဲလေ...။
တရားသလား မတရားဘူးလား ? တရားရင်ကော ဘယ်သူက တရားတာလဲ မတရားရင်ကော ဘယ်သူက မတရားတာလဲ? ဘယ်ကိစ္စမဆို နှစ်ဘက်မြင်အောင်ကြိုးစားပါ...
အဓိက ပြောချင်နေတာက လူ့ဘဝကြီးကအူကြောင်ကြောင်ပါ ရည်းစားများတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်လိုပါပဲ ခဏခဏ ဟောတယောက်ဟောတယောက် ပြောင်းနေတဲ့ သူ့ရည်းစားတွေကို မှတ်မိဖို့ခက်တတ်သလို လောကကြီးကို နားလည်ဖို့လဲ သိပ်ခက်ပါတယ် တခါ လောကကြီးကို နားလည်သလိုလိုထင်လာတော့လဲ လောကကြီးမှာ ရှိနေတဲ့ တရားမှုတွေ တရားမမှုတွေ မတရားမှုတွေအတွက် ကိုယ်က ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်တာသေချာလာပြန်ပါရောလား။ အဲ့တော့လဲ မအယ်ဇီပြောသလိုပဲ ဖြည့်တွေးပေးရမလား ခေတ်ပျက်ထဲမှာ ရူးချင်ယောင်ဆောင်ရမလား၊ လျာရှည်ပြီး လျောက်တွေးနေရမလား၊ နေပူတယ်လေ နော် အဲ့တော့ လူကလဲ အူတူတူပေါ့။ စိတ်တွေလဲ ဂရောင်ချောက်ချားတွေဖြစ်နေတော့ လျောက်တွေးမိတာပေါ့ တွေးမိတော့ လျောက်ရေးတာပေါ့ လာဖတ်သူတွေကိုတော့ အားနာပါတယ်လေ...
(Wm. Henry Davies (1871-1940) is to be considered as the poet of the tramps. Born at Newport, Wales in the UK, Davies came to America from Great Britain and lived the life ofavagabond. One day, as the result of jumpingatrain, he lost one of legs. Davies returned to England where he continued to live the life ofatramp andapeddler. He wrote poetry (presumably he did right along) and, eventually, he determined to print his own book and did so with the little money he earned panhandling. A copy of this first work, A Soul's Destroyer, came into the hands of George Bernard Shaw; which, in turn, led to the popularization of the poet.
Posted by တီချမ်း at 3:20 AM
Rita May 20, 2010 at 8:39 AM
Rita May 20, 2010 at 8:42 AM
Vista May 20, 2010 at 8:48 AM
may May 20, 2010 at 11:53 AM
may May 20, 2010 at 11:55 AM
အန်တီချမ်း May 20, 2010 at 2:56 PM
အန်တီချမ်း May 20, 2010 at 3:10 PM
little brook May 20, 2010 at 3:56 PM